Izityalo kunye netafile yePool eVacherie, eLouisiana
Ecaleni kweGreat River Road kumbindi welizwe lezityalo, i-Airbnb yakho ikwidolophu encinci yaseVacherie, eLouisiana. Uya kuba phakathi kweemayile ezi-6 ze-5 amakhaya okulima adumileyo, kubandakanya i-Oak Alley, iSt. Joseph, iLaura: iCreole Plantation, iWhitney, kunye neEvergreen.
IVacherie ingaphantsi kweyure yokuhamba ukusuka eNew Orleans naseBaton Rouge, kwaye indlu ikwiikhilomitha ezi-2.4 ukusuka kwibhulorho yeSikhumbuzo seVeteran. IVacherie sisixhobo esibalulekileyo sokumisa kwindawo yakho yokutyala kunye nokhenketho lomlambo eSouth Louisiana.
Eli khaya labucala liyi-duplex kwaye lineeyunithi ezi-2 ezahlukeneyo.
Ukusukela ngoFebruwari 2021, ngoku sinekhitshi eligcweleyo elinesikhenkcezisi esipheleleyo, imicrowave, uluhlu lwegesi, isitovu, itoaster, kunye neKeurig ikofu maker. Sibonelela nge-oatmeal kunye ne-pop tarts, kunye nekofu, i-cocoa, kunye neti ukuze ube nesidlo sakusasa esishushu ukuqala usuku lwakho. (jonga imifanekiso ngeenkcukacha ezithe vetshe) Kutshanje songeze igumbi eliluncedo elinewasha, isomisi, kunye nesinki, apho iindwendwe zinokufikelela simahla.
Uya kuba nokufikelela kwitafile yephuli, ibhodi yedart, kunye neminye imidlalo kwigumbi lomdlalo. Usenokuziva ngathi use "mqolombeni wendoda" kuba indawo yomlilo yamatye ihonjiswe ngamaxhama akhwele iimbadada.
Kukho i-driveway egangathiweyo apho unokumisa khona imoto yakho kwaye akukho zinyuko ngoko ukufikelela kwiyunithi kulula.
IVacherie inokuba yeyona mfihlelo igcinwe kwindawo yokulima. I-Vacherie luluntu oluncinci oluneendawo ezimbalwa ezintle zokutya. Uninzi lweendawo zokutyela kunye neevenkile zibekwe ngaphesheya komlambo malunga neemayile ezisi-7 kude, kude neZiko loKwamkeleka kwiParish yaseSt. Thina
Yonwabela imfihlo yeParadesi yeSportsman! Siza kukunika indibaniselwano yesitshixo, kwaye unokuza kwaye uhambe njengoko ufuna. Ngenxa yezithintelo ze-Covid, asizokubulisa xa ufika. Sikwaphucule iinkqubo zethu zokucoca ukuze sihlangabezane nazo zonke izikhokelo zokhuseleko ze-Covid-19.
Sihlala malunga nemizuzu engama-30 kude kwaye siyafumaneka ukuba sinemibuzo okanye iinkxalabo. Ungasoloko uqhagamshelana nathi nge-inbox yakwa-Airbnb, ingena ngqo kwimiyalezo yam ebhaliweyo.
Yonwabela imfihlo yeParadesi yeSportsman! Siza kukunika indibaniselwano yesitshixo, kwaye unokuza kwaye uhambe njengoko ufuna. Ngenxa yezithintelo ze-Covid, asizokubulisa xa ufika.…